मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्न स्थानकाे अभाव – Himalaya TV
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्न स्थानकाे अभाव
३ असार २०७४, शनिबार ०८:१३
भक्तपुर, ३ असार । स्थान अभावले गर्दा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ ।
नयाँ आउने बिरामीको उपचार गर्नसमेत कठिनाइ भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सरकारले चार वर्षअघि स्थापना गरेको केन्द्रमा हाल दैनिक दुई सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । केन्द्र स्थापनाकालमा दैनिक २० देखि ३० जना बिरामी आउने गरेकामा अहिले त्यसको १० गुणा बढी बिरामी केन्द्रमा पुग्ने गरेका छन् ।
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले स्थान अभावकै कारण उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिए । सरकारी अस्पताल भएकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डाइलासिसमा सबैभन्दा गुणस्तरीय र उत्कृष्ट सेवाको कारणले बिरामीको चाप बढी भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले थपे , “बिरामीको चापले गर्दा अब प्रत्यारोपण र डायलासिसमा समस्या भइरहेको छ । ”
उनले भने , “हामी नयाँ बिरामीका लागि डायलासिस गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । एउटा भवनमा मिर्गौलाको उपचार सेवा थालनी गरेको अस्पतालले पछिल्लो समय मुटुरोग, युरोलोजी तथा लिभरको समेत उपचार गरिरहेको छ । ओपन हार्ट सर्जरी (मुटुको भल्ब फेर्ने), फोक्सोको शल्यक्रिया र मिर्गौला रोगका बिरामीको चाप अत्यधिक भएकाले अब यही अवस्थामा केन्द्रले बिरामीको भार थेग्न सक्दैन”, श्रेष्ठले भने, “सरकारले केन्द्रलाई विस्तार नगरे अब उपचार दिनसक्ने अवस्था छैन । ”
अस्पतालकी वरिष्ठ नेफ्रोलोजिस्ट डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा पैसा तिरेर डायलासिस गर्नेको सङ्ख्या १३ सय ३७ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा दुई हजार ९४७ रहेको जानकारी दिए । याे खबरगोरखापत्र दैनिकमा छ ।